Qiyaasta Xili Hore Filimka Jab Harry Met Sejal Maalintiisa Labaad Lacagaha Uu Keenay | Filimside –
Qiyaasta Xili Hore Filimka Jab Harry Met Sejal Maalintiisa Labaad Lacagaha Uu Keenay
Aug 5, 2017 - 1 Jawaab
Shabakada Boxoffice India ayaa xili hore kasoo daabacday filimka Jab Harry Met Sejal maalintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay qiyaasta xili hore.
Maqaalka ay shabakada Boxoffice India filimka JHMS kasoo daabacay kuuna soo turjuntay shabakada Filimside fadlan hoos kaga bogo:
SRK iyo Anushka Sharma filimkooda JHMS ayaa la daala dhacay maanta inuu sare u kac sameeyo waayo ganacsigiisa ka baxsan magaalooyinka hoos u dhac ayuu sameeyay.
Qiyaas ahaan filimka JHMS wuxuu maalintiisa labaad keeni doonaa 14 Crore ilaa 14.50 Crore lacago u dhaxeeyo taasina waxay ka dhignaan doontaa in ganacsigiisa mudo labo maalmood noqon doono 29.50 Crore.
Waa macquul in JHMS maalintiisa labaad uu ku dhawaado ganacsi ahaan maalintiisa kowaad marka berito subax si rasmi ah loo helo lacagihiisa rasmiga ah laakiin fursada wey yar tahay maalinta labaad uu kaga lacag badnaan karo maalintiisa labaad.
Waa arin la filaayay inay sidaan dhici karto madaama JHMS loogu tala galay oo kaliya dadka reer magaalka ah sidaa darteed inuu sare u kac sameeyo wey adag tahay ayadoo ay xadidan tahay fariintiisa.
JHMS wuxuu ku socdaa qaabka Tubelight oo kale laakiin filimkaan ayaa lacagihiisa gaabis yihiin, sidoo kalena qaabka Tubelight oo kale ayuu maalintiisa labaad hoos u dhac u sameeyay waana halis jirto madaama ay xadidan tahay daawadayaasha loogu tala galay.
Waa wax la filaayay arinkaan madaama Director Imtiaz Ali uu yahay shaqsi sameeyo aflaanta dadka reer magaalka loogu tala galay waana halis jirto weli.
Maalinta Isniinta ah fasax gaaban ayaa Hindiya ka jiro gelinka dambe taasi oo caawin karto filimkaan Axad iyo Isniin inuu labadaas maalmood.
Laakiin midaas ma bad baadin karto filimkaan waqti dheer marka laga baxo Axad iyo Isniin shaqo xoog leh ayaa hortaalo oo ah inuu ganacsigiisa is celiyo weyna adag tahay madaama magaalooyinka waa weyn kaliya laga daawanayo.
Waxaa Aqriyay: 1,403
wll darajada filimka malagu qiimaynayaa lacagaha uu caalamka ka soo xereeyo.